Amanqaku kwi-DR Congo
Ungawufumana njani umsebenzi eDR Congo? Isikhokelo esikhawulezayo sabaphambukeli kunye nabaseCongo
Aprili 25, 2020 IShubham Sharma DR Congo, imisebenzi
Kweli nqaku uza kufumana iindlela ezahlukeneyo onokufumana ngazo umsebenzi e-DR Congo (DRC). Mininzi imisebenzi yokuphuma e-DR Congo. I-Democratic Republic of the Congo lilizwe elimi kuwo
Inkqubo yemfundo: IDemokrasti yaseDemocratic
Matshi 5, 2020 UKaruna Chandna DR Congo, isikolo
IDemocratic Congo lilizwe eliziikhilomitha ezingama-342,000 e-Equatorial Africa. Abemi bayo bangaphezulu kwezigidi ezisixhenxe. Malunga ne-7% yohlahlo-lwabiwo mali lwaseCongo ichithwa kwinkqubo yemfundo. I-12.6% kwizikolo zaseprayimari, i-40% kwinqanaba lesibini kunye ne-31% kwinqanaba lemfundo ephakamileyo. Kwaye
Ukhathalelo lwempilo kunye nezibhedlele ezilungileyo kwiRiphabhlikhi yaseCongo.
Februwari 14, 2020 IShubham Sharma DR Congo, impilo
Inkqubo yokhathalelo lwempilo kwiRiphabhlikhi yase-Kongo Izibhedlele zikawonke-wonke nezixhobo zonyango zibubuchule kakhulu, oko kuthetha ukuba abakwazi ukubonelela ngeendlela zonyango ezifanelekileyo ngokuhambelana nemigangatho yasentshona. Ukhathalelo lwezeMpilo kunye neziBhedlele ezilungileyo kwi
Elona xesha lilungileyo lokuNdwendwela kunye nokuHlola i-Democratic Republic Congo
Februwari 14, 2020 UAntika Kumari DR Congo, hamba
Elona xesha lilungileyo lokutyelela kwaye uphonononge iDemocratic Republic Congo ngexesha eliluhlaza ukusuka ngoMeyi ukuya kuSeptemba, nangoJulayi eyona nyanga yomileyo, ilandelwa nguJuni. Iqondo lokushisa lihla kancinci kwezi nyanga. Kukho kwakhona okufutshane
Iindawo ezigqibeleleyo zokuhlala eDRC
Februwari 14, 2020 UMaitri Jha DR Congo, iihotele
IDemokhrasi ye-Kongo (DRC) ayisiyelizwe lesibini ngobukhulu e-Afrika kuphela kodwa ikwelinye lawona mazwe atyebileyo ngobutyebi kulo mhlaba kwaye anentabalala yegolide, i-tantalum, i-tungsten kunye ne-tin. Ukuba u